Kedu ihe a ga-ebu na akpa iji ụgbọ njem? | Akụkọ Njem
Monica sanchez | | Gbọ elu, Atụmatụ
Kedu onye na-achọ ibu? Ọ bụ akụkụ nke na-abụkarị ihe na-agwụ ike, nke ọma, kama naanị ya. Mana mgbe anyị kpebirichara ebe ọzọ anyị ga-eso na ụlọ ọrụ anyị ga-efe, mbukota bụ otu n’ime ihe na-ewe anyị ogologo oge.
N'ihi na gịnị ka a ga-ebu na ibu? Ndepụta a sara mbara nke ukwuu, yabụ iji zere nsogbu na nsogbu Aga m enyere gị aka ịkwadebe akpa gị.
1 Ihe ndị enweghị ike iburu n'ụgbọelu
1.1 Nkọ ihe
1.3 Ngwaọrụ na kemịkal
1.4 Nwere ike ibute nri n'ụgbọ elu? Na-a drinksụ?
2 Ihe ndị amachibidoro iwu, mana ọ nwere ike ịkpalite ndị nchọpụta igwe
3 Ihe ị nwere ike iburu n'ụgbọelu
3.1 Ngwaọrụ eletrọniki
3.2 Ngosiputa Ngwa
3.3 Nri maka nwa gị na ọgwụ
Ihe ndị enweghị ike iburu n'ụgbọelu
Ma ọ bụ obere anyị niile nwere echiche banyere ihe ndị na-ekwesịghị ịdị na akpa anyị, mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị nwere obi abụọ gbasara ụfọdụ, ọkachasị ndị ga-adị oke mkpa ozugbo ụgbọelu ahụ rutere. Yabụ, Olee ndị nke anyị ga-ahapụ n’ụlọ?
A machibidoro ihe niile dị nkọ iwu, dị ka ice ice, mma (ma e wezụga ma ọ bụrụ na ọ bụ plastik), mma agụba, mma agha. Alsokwesịrị idobe agụba, n'ihi na ha nwere ike imebi ihe. Anyị maara na ị gaghị emerụ onye ọ bụla ahụ, mana ha amaghị nke a na ọdụ ụgbọ elu, yana n'ezie ọ ka mma ịnọ na nchekwa karịa nwute. Ọzọkwa, ọzọ n'ime ihe ndị a na-anaghị ekwe ka ha nọrọ n'ọnọdụ ọ bụla bụ egbe ma ọ bụ ihe mgbawa: egbe, aerosols, mgbawa plastik, bọmbụ grenade, ma ọ bụ mmanụ ụgbọala ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ha dị oke egwu, yabụ na njikwa agaghị achịkwa ha.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ na ị ga-eme egwuregwu na ebe ị na-aga, ọ dị nwute na ịgwa gị na ị gaghị ewere ndị a: harpoon, osisi ski, golf ma ọ bụ hockey, osisi baseball, ụta ma ọ bụ akụ. Nwere ike ibiri ya mgbe niile n’aka onye ị maara ebe ahụ, maọbụ gbazite ya.
Ngwaọrụ na kemịkal
N'aka nke ọzọ, anaghị ekwe ka ngwaọrụ, dị ka anyụike, mkpọ nkụ, ube, nkwọ, ma ọ bụ ndị a na-eji akụ ihe n’ogwe osisi. Ma echegbula: ọ bụrụ na ịchọrọ ha, dịka ọmụmaatụ iji rụọ ọrụ n'ụlọ, ha ga-ahapụrịrị gị maka gị. O di nwute, ị ga-enwerịrị ihe osise na kemịkalMa ọ bụ ịcha ọcha, ịgba agba ma ọ bụ ikuku gas.
Nwere ike ibute nri n'ụgbọ elu? Na-a drinksụ?
Gịnị banyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ? ¿Enwere ike ibute nri n'ụgbọ elu? Ma ị ga-eleta ezinụlọ gị, maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ iweta ihe ebe a, ị kwesịrị ịma na dịka ụkpụrụ ndị International Civil Aviation Organisation (ICAO) na European Civil Aviation Conference (CEAC) guzobere, sma kwe ka o buru ihe ruru 100 mililita mmiri mmiri, ma ọ bụrụhaala na ha dị n'ime akpa plastic, kaa akara, 20 cm x 20 cm. Banyere nri, ndị amachibidoro iwu bụ: sauces, jellies, cheese, yogurts na ihe ndị ọzọ.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị gaa dịka ọmụmaatụ na Mallorca (Balearic Islands, Spain) ma ịchọrọ iwebata, nke a a ga-akwụ ụgwọ; ma ọ bụghị na ịnwere ike ịnweta ntaramahụhụ ihe dị ka euro 30 dabere na ụlọ ọrụ ahụ.
Agbanyeghị, Anyị na-akwado ka ị gụọ atumatu ụgbọelu gị iji chọpụta ma ị nwere ike iri nri n'ụgbọ elu ma ọ bụ ụdị nri ha na-ahapụ. N'ọnọdụ ụfọdụ enwere mgbanwe dị iche iche tupu ị gaa ọdụ ụgbọ elu na nri, gbaa mbọ hụ na ịnwere ike iri nri n'ụgbọ elu ị ga-efe.
Iji maa atụ, na njem mụ na Portugal m zụtara ụfọdụ ite dị mma nke nchekwa iji nye ndị ezinaụlọ na ndị enyi mana ka ha gafere ego mililita e kwere, m ga-ahapụrụ ha n'ala. Agbanyeghị, a na-ahapụ ụdị nri ndị ọzọ, ya mere, Ee, inwere ike iri nri n'ụgbọ elu, n'agbanyeghị na anaghị adị.
Ọ bụrụ na ụgbọ elu ahụ dị n'etiti mba ndị ọzọ, enwere nri ndị enweghị ike ibubata na obodo agbata obi n'ihi ihe egwu dị na ahụike ọha na eze.
Ihe ndị amachibidoro iwu, mana ọ nwere ike ịkpalite ndị nchọpụta igwe
Na mgbakwunye na ihe niile anyị kwuru, enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịkpalite ndị nchọpụta igwe, dịka Ịkpọpu akụkụ, prosthesis, ọla, igwegharị, akpụkpọ ụkwụ na belt nkechi.
Pikpọpu akụkụ: mgbe ọ bụla o kwere omume, a na-atụ aro ya yipu ihe nile i nwere ike. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe kachasị nwere ike ime bụ na onye nyocha ahụ na-arụ ọrụ, n'ọnọdụ nke ị ga-ekwu na ị na-eyi ube na voila.
Nkwupụta: dị mkpa iji gwa tupu iningomi.
Ọla: tupu ịgafee Control ọla ntị, olu na mgbaaka ga-ewepụ iji zere ịkpalite onye nchoputa. Anyị ga-etinye ha na atẹ na anyị nwere ike iwere onwe anyị tupu nyocha.
Mobile: otu ihe ahụ dị ka ọla, ma ọ bụ bụrụ ihe amamihe dị na ya: anyị ga-etinye ya n’ime akpa akwa tupu ị gawa na ọnụ.
Akpụkpọ ụkwụ: ọ bụrụ na ha nwere ihe eji ọla, ịchọ mma ma ọ bụ nkechi, ị ga-ewepụ ha tupu iningomi.
Belt Buckles - Na-ada ụda nyocha mgbe niile, ya mere o nweghi ihe ozo kariri iwepu ya.
Ihe ị nwere ike iburu n'ụgbọelu
Ugbu a anyị ahụla ihe niile anyị ga-ahapụ n'ụlọ, na mgbakwunye na otu esi egbochi oge ọjọọ na Nchedo Nche, ka anyị hụ ihe nwere obi abụọ anyị nwere ike iwere n'enweghị nsogbu:
N'oge ndị a, ọ dịghị onye chọrọ ịhapụ nke ha Igwefoto foto, mbadamba, laptọọpụ tere aka ya smartphone, eziokwu? Ọ dabara nke ọma, na ọdụ ụgbọ elu, ha agaghị agwa anyị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị na-ebu ya na akpa ma ọ bụ na-ebu ihe. Anyị nwere ike iji aka ya buru ya, mana iji zere izu ohi ọ ga-aka mma ma anyị tinye ya n'ime igbe ahụ. N'ụzọ dị otú a, a ga-echebe gị karịa.
Oh, ihe ntecha! Ha enweghị ike ịhapụ uche ha deodorant, ma ọ bụ lipstick. I nwekwara ike iweta gels ọgwụ ọ bụrụhaala na ha gafere oke njedebe 100ml. Oh, echefula banyere ntutu ntutu.
Nri maka nwa gị na ọgwụ
Ọ bụrụ na nwatakịrị gị ka na-a milkụ mmiri ara ehi na karama ma ọ bụ na-eri porridge, ị nwere ike iweta oke nri dị mkpa iji nye ya nri. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-a medicationụ ọgwụ, ha agaghị agwa gị ihe ọ bụla; Naanị ị ga-ahụrịrị na ọ dị na akpa mbụ yana ị na-ebu ọgwụ ọgwụ.
Ma ọ dịghị ihe ọzọ. Were NJ gị (na paspọtụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ụgbọ elu mba ụwa), ma nwee ọ !ụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Kedu ihe a ga-ebu na akpa?
Ndewo, ehihie ọma, enwere m obi abụọ, aga m ekele gị maka ịza m.
Enwere m ụmụ m na-agụ akwụkwọ na Argentina ha nyere m iwu ụfọdụ swiiti, achịcha ọka, ite nke chili, cheese, chili uhie, enwere ụfọdụ ihe mmadụ ga-aza m ma ọ bụrụ na m ga-ekele ha
Zaghachi ka enedelia castillo gonzalez
Ego ole ka ngwongwo na ngwongwo aka ga-echekwa na njide nke ụgbọelu, otu onye?
Zaghachi Iaakov Avdo Serrano
N’ihe banyere ụmụaka, e kwekwara ka ha buru otu ibu dịka ndị okenye?
Iwu ahụ malitere ịdị na-emetụtakwa ọdụ ụgbọelu dị na South America?
Enwere m ekele maka nzaghachi gị n'oge.
Anọ m na Buenos Aires ma zụta akụrụngwa ozonation ọgwụ.Egwuregwu elektrọnik, enwere ike iburu ya gaa n'ụlọ nkwakọba ihe nke ndị otu Normel ka m ga-akwụ ụgwọ ọzọ ???
Enwere m ike iburu aerosol azụmaahịa ma ọ bụ ịgba ihe na akpa m enyocha?
Zaghachi Juan José
Ndewo, m ga-achọ ikwenye ma ọ ga-ekwe omume ibute ihe na-esi ísì ụtọ millilita 50 na ole n'ime ha ga-ebu.
Zaghachi ka islay
na ụgbọ elu na South America site na London ma na-eme ọdụ na Spain.
Ole senti ka ị ga-eyi ebe ọ bụ ha ga-enye ndị ikwu m ...
Ndewo, achọrọ m, ebi m na Iquique, I nwere ike iji ụgbọ elu were karama gaa Santiago, echere m na ị ga-aza m, daalụ.
Ekwesịrị m njem si Spain gaa France, enwere m ike ịlele ihe ọ myụ lugụ akpa m na brik na ngwaahịa oyi na akpa isothermal ???
Enwerem ụfọdụ ndị enyi na Colombia ha nyere m iwu chilị na chiiz akọrọ, enwere m ike iwere ya na igbe nke na-aga n'ime ụlọ okpuru ulo?
christina maria c. chiedozie dijo
Ego ole karama mmanya m nwere ike isi na Portugal gaa Tenerife, na-akwụ ụgwọ, n'ezie na Ryanair
Zaghachi cristina maria c. chiedozie
Ndewo, a ga m aga Rio de Janeiro, a na m eweta ọtụtụ ihe na-esi isi ọma ka m nye tomụnna m ndị ụka Kraist, m ga-achọ ịmata mmadụ ole m nwere ike iwere na kwa ọ bụrụ na m ga - ewere iko mmanya 2. Daalụ
Zaghachi alejandra Frola
Anaghị anabata ya iweta karama mmanya maka na ha gafere ego enyere: 100 ml. You nwere ike ibu mmanụ na-esi isi na-ebu mmanụ naanị ma ọ bụrụ na ha agafeghị otu ego a.
Ndewo, n'ọnwa Jenụwarị m ga-esi Medellín gaa Cartajena site na avianca areolinea, ụfọdụ ndị enyi m nwere ebe ahụ, ha nyere m ọrụ ka m wetara ha ụfọdụ azụ anaghị adị mfe n'ebe ahụ, yana ụtọ na mkpụrụ osisi. Ọ ga-amasị m ịmara ma ahapụla nke a ka ọ na-ebu ụgbọ elu. Daalụ.
Enwere ike iweta chiiz agụụ na ihe oriri na oyi kpọnwụrụ na Argentina?
Zaghachi Tamara Kaufmann
Ya mere, ọ dịghị etemeete na aka aka? nne m otu ha si tufuo akpa ha enyocha ...
Ọ ga-amasi m ma ole m ga - ebu ma ọ bụrụ na m ga - ewere pisco, bred, achicha Ista, achicha ma ọ bụ na m na - ebu nri ụfọdụ mgbe ụfọdụ mana achọrọ m ijide n'aka
Zaghachi maria martinez
Achọrọ m ịma ma ọ ga-ekwe omume ma ọ bụ na m ga-enweta akwụkwọ ikike ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume iweta ihe ndị dị na mmiri, dịka oporo, octopus ... Na anụ ezi na Nicaragua ???? Na-eche azịza gị daalụ
Ọ ga-amasị m ịmara ma m nwere ike iburu osisi na akpa aka m ma ọ bụ na m ga - enyocha ya (anyị na Emirates si Thailand si Dubai - Dubai - Madrid)
Ingrid kwụsị dijo
Nnọọ . M na-eme njem na Chile si Norway. Nwere ike weta chiiz gbara agba na mkpụrụ agba. Achọrọ m ozi a
Zaghachi ka Ingrid kwụsị
Kedu ụdị onye njem ị bụ?